China Shower Seti Abavelisi kunye nababoneleli-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > ISeti yeshawari
ISeti yeshawari Abavelisi
Iseti yeshawari ineemveliso ezininzi kwisethi. Iqulethe zonke iimveliso zethu eziphambili, iishawari zezandla, iishawara eziphezulu, imibhobho yeshawa, i-shataf, iitephu, kunye nezibiyeli zeshawa. Xa abathengi behombisa ikhaya elitsha, banokuthenga ngokuthe ngqo le seti yeshawari. Ilunge kakhulu, zonke iimilo kunye neempawu ziya kuhambelana ngokugqibeleleyo. Ewe kunjalo, abathengi banokutshatisa iiseti ezahlukeneyo ngokwezinto abazithandayo.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweshawari entsha eseti ngobungakanani obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala iinketho ezahlukeneyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu weemveliso uqinisekiswa bubuchwepheshe obuphambili, izixhobo zanamhlanje, kunye nolawulo lomgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, iimveliso zithengiswa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
IRetractable Round Shower Rod Seti
Iseti yokuhlamba ejikelezileyo enokurhoxiswa, isethi yeshawari ibandakanya i-faucet, kwaye zonke izixhobo zinokudityaniswa ngokuthanda.
Iseti yentonga ye-Square Shower eRetractable
Retractable square shower rod set is a suti eyahlukileyo kakhulu, zonke iimveliso zakhe zisikwere. Ubude bentonga yeshawari bunokwenziwa ngokwezifiso, kwaye bubuye buhoxiswe.
Iseti yeshawari yesikwere yeClassic
Iseti ye-square classic shower, i-design yesangqa sesikwere, i-brocket-plated bracket ihluke kwi-spray-painted silver shower rod, ihle kakhulu.
ISeti yeshawari yoQoqosho
Ezinye iimveliso zeshawari eziLula iseti zinodidi kakhulu. I-Economic Shower Set sele ikhona kwimarike iminyaka engaphezu kwe-10, kodwa zisathandwa.
ISeti yeshawari elula
Iseti yokuhlamba elula, isibiyeli sodonga lwesikwere izisa imvakalelo ekhethekileyo kwikholamu yeshawa ejikelezayo. Iseti yeshawari yeklasikhi kakhulu, zombini ngokwesitayile kunye nomgangatho, zikhuphisana kakhulu
Iseti yeshawari ye-Electroplating yakudala
Iseti yeshawari ye-electroplating yeClassic yodwa kakhulu. I-8-intshi ephezulu yeshawari ihambelana ne-cylindrical hand shower.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili ISeti yeshawari zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu ISeti yeshawari uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.